What Doesn't Kill Me — UHAMBO LEE
Xa uza kweli xesha kunzima, abantu abasoloko andazi ukuba ndithini. Isiphumo clichés nantsingiselo okanye iinzame trite ukuba kukonwabisa. Ndiye ebezisoloko ingxaki ungasuki phrases- uhlobo oko akuthethi nto umntu esithi kubo, Okunene ukunceda umntu aziva. izinto ezidengileyo ezifana, "Chin phezulu" "Iyakuba ngcono." Ngokwenene? Wazi kanjani? Wena ke musa ukwenza abahlobo bakho na amalungelo ngokubanika ukukhanya, amathemba afukufuku ukuba ezingasekelwanga nantoni. Xa hits intlungu enzulu kufuneka rock inyaniso eqinileyo ukuze kusixhasa.
Ngexesha kwinkxalabo ngumhlaza, Christopher Hitchens wavakalisa inkxalabo efanayo kunye ngamabinzana athile nantsingiselo sizilahla ngeenxa. Uchitha amaphepha ambalwa ehlasela omnye wabo kwincwadi yakhe, Mortality. Uthi, "Ukuthi ngqo, Ndiyeke kancinane ukukhupha isaziso sokuba 'nantoni ingawubulali indenza bomelele.' "Yena uya mgama, "Kwihlabathi ezingenangqondo emzimbeni ... kukho zonke izinto ezininzi kakhulu ukuba bambulale wena, musa ukumbulala ukuba, aze akushiye kakhulu buthathaka. "Ayikwazi uvakalelwa nje uvuyo?
Oku kuvakala uxinezeleke, kodwa ndicinga Hitchens ilungile ngengqiqo. Kuyinto kunokwenzeka ukuba singaya zinto kunzima ukuba buthathaka kuphela sizise ngakumbi ukufa. Ndiya unokuthelekelela umntu ebuza umbuzo, “into njani le yoyikekayo ukwenza yandenza ndomelela?” Nokuba abantu abaninzi kaGawulayo kwaphulwa phantsi yinkohlakalo kwelizwe lethu owileyo. Nethemba singafa kuphela ukubethwa abaninzi kangaka de waphula, kwaye ngokwenene ekugqibeleni ezisiminxayo ngaphandle. Amabinzana xa evakala cute ngoku kubonakala yanto. Kodwa ke luvo kakuhle-intsingiselo Hitchens wahlasela wenyaniso? ndicinga njalo.
"Yintoni na ukumbulala indenza bomelele" kunokwenzeka, kodwa kuphela ukuba kukho into engaphaya kobomi. Ukuba le ubomi, kweli hlabathi, yaye eli qumrhu zonke kukho, Hitchens ilungile. Yinto ubuxoki. Bekuya kuba esithi, "Yintoni na Isixa imoto yam eyenza bomelele." Oko Maxa. Ningathanda ukuba ngoyaba inyaniso ukukholelwa ukuba. Kodwa ukuba izilingo yexeshana ezinye uhlobo lwentsingiselo obungunaphakade itshintsha yonke.
UPawulos usixelela, "Basebenzisane Zonke izinto okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqibo yakhe." Le vesi amaxesha axhatshazwe, kodwa ke omnye izithembiso ezininzi ezintle kuzo zonke iZibhalo. Oku akuthethi ukuba amaKristu sehlela. Sonke Sehlelwa zizilingo, kodwa ngeke ekugqibeleni koyiswa ngabo. Lintshaba zethu weengxaki, ezifana ukubandezeleka nokufa, babe ngabahlobo bethu noKrestu, ngenxa yokuba ekugqibeleni ukusebenza ngakwicala lethu.
Ngoko kanye na ezi zilingo etshabalalisayo kubenza sibe namandla? Nazi iindlela ezintathu (kunye overlap ebonakalayo):
1. Asenza kuxhomekeka uYesu
Xa ndiziva ngathi yonke ebomini bam uza kakuhle, intliziyo yam ngoko nangoko tshwa self-ukuxhomekeka. Oku aluze lutshitshe. Ndiqalisa ukuthandaza ngaphantsi kuba zinganegalelo bacinga mna kuswela nto. Ndibe nebhongo ngokuba bacinga ukuba isizathu yonke izakuba kakuhle. Ngaloo maxesha, Ndiya silibale ukuba uThixo waso izipho ezilungileyo, kwaye kusafuneka ukuba akuxhase kum. Ndicela ukuba kambe Mna selungelweni bonke beenceba zakhe.
Kodwa xa iimvavanyo indlela yethu, abonisa ukuba ubuthathaka bethu. Ukugula usikhumbuza indlela ethe thina, walala-offs zisikhumbuza ukuba umsebenzi onzima akuqinisekisi nantoni, nongquzulwano isikhumbuza ukuba kufuneka uYesu kwimimandla yonke yobomi bethu.
2 Korinte 12 na sisonwabiso kum ngamaxesha ubuthathaka. UPawulos uyayiqonda ukuba uThixo wamnika i silingo ukuba 'sihlale [yena] zigcwale niziingqondi. "Kwaye uthi ngesisulu ngovuyo ndafika yakhe, kwaye nguye umxholo zonke iintlobo izilingo. njani uPawulos ukwaneliseka nokuba vuyani zilingo? Ndicinga ukuba uPawulos uthi ukuba ezi zilingo kwenza kucace ukuba kufuneka ubabalo lukaThixo namandla. Self-ukuxhomekeka endandibuthathaka, kunye nokuxhomekeka Kristu amandla. Ngoko uPawulos uthi, "Xa ndibuthathaka, kuxa ndinamandla. "
2. Asenza ngakumbi uYesu
Siza asoze sikwazi ukunyamezela izilingo etshabalalisayo de siyaqonda ukuba intuthuzelo yethu nempilo olungileyo yintoni eyona nto ibalulekileyo. Intuthuzelo nempilo zizinto ezintle uThixo uyakuvuyela asinike. Kodwa ukuthanda kukaThixo ephambili ubomi bethu kukuba siya kufana uYesu. Kwaye ukuba ukulungele ukusebenzisa iimvavanyo ukufeza ukuba. Hebhere 12 uthi, "[uThixo] usiqeqeshela okusilungeleyo, ukuba sibuxhamle ubungcwele bakhe. "Uqeqesho ejimini kaThixo Buyinto amaxesha, kodwa Uya kusenza ngakumbi.
James 1:2 qatha engqondweni, apho usixelela ukuba "Kubaleleni ekuthini kuluvuyo, bazalwana bam, xa udibana neemvavanyo ezahlukahlukeneyo…"Isizathu sifanele ekuthini kuluvuyo umlinganiswa uKristu uvelisa. ukuthobeka zethu kubaluleke ngaphezu ulonwabo lwethu. Kubhetele ukuba buthathaka emzimbeni kwaye womelele ngokomoya.
3. Benza kudala kuba uYesu
iintliziyo zethu buthathaka sisono, kwaye sisoloko sizifumana ngokulangazelela ngaphezulu oko eli hlabathi. Kodwa xa uvuyo okwethutyana kweli hlabathi zithathwe kuthi, sisheke ziyakhunjuzwa ukuba Umhlaba ayikho ekhaya. ubumi yethu kwenye.
Ndiyakuthanda Salibala kwiihotele intle, kwaye xa ngaba ndizama ukuba ngokusebenzisa onke olunoncedo. Kodwa ke ukuba aphoswe umfazi wam, kwaye ke ndiyaqonda andinalo iimpahla bendizama ukuzisa, kwaye ke ndiyaqonda inkonzo Igumbi malunga nesiqingatha njengoko kulungileyo, njengoko yokupheka umfazi wam. Khumbuza ukuba kule hotele ayikho ekhaya. iminqweno ulindelo ukundenza elide sibekho kwikhaya. Le umhlaba apho thina, nezilingo kusikhumbuza ukuba iparadesi yethu kwenye, kunye neNkosi yethu. Akuyi kubakho iminqweno ulindelo eZulwini, kuba iNkosi yethu kuya kwanelisa yonke impahla yethu. Yena uza kuziphelisa iintlungu umgalele ubabalo lwakhe phezu kwethu ngonaphakade.
Ngoko ke kwixesha elizayo unomhlobo kweli xesha linzima, abakhuthaze ukuba kwezona meko ebuhlungu kusenza sibe namandla. Hayi iingcinga ezintle kwentembeko, kodwa ithemba lokwenene utshintsho lokwenene. Kwaye xa uza kusetyenziswa ngexesha enzima, makuthethe kusondela ngakumbi kuKristu. Musa ukoyika, uNdikhoyo unawe.
ithemba Ikholwa yeyona obungaphesheya kwengcwaba, kwaye kubomi elilandelayo siza kuba kunye naye. Ngoko ke nokuba yintoni ubulala thina kusenza namandla.
emr • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 2:06 pm • impendulo
Buddy • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 2:25 pm • impendulo
uhambo Siyabonga, ukuba kanye oko ndandifuna ukuva ngoku. Kweli xesha super elinzima kunye nokuthembeka kwakhe ukuthuthuzela abantwana bakhe akaze asilele mangaza kum.
Kwena Albert • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 2:39 pm • impendulo
Awesome piece.I uza kuzibhangisa kusini na cliches yesiqhelo kwaye endaweni ukucetyiswa abo intlungu ukususela namhlanje kuse phambili ukuba akhangele eweni elisemalengalengeni i..Thank wena sir
Michael • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 2:55 pm • impendulo
Oku Akumangalisi kancinci ukufunda. Mna andizange ndicinge ngemeko amazwi ezintle kwiimeko ezimbi ekubeni into embi. kodwa, kwakhona, nto ngalo uzuko lukaThixo ukuba sikwazi ukulawula ngokusebenzisa amaxesha anzima yaye siyaqonda ukuba kukho into enkulu kunale eli hlabathi. Yintoni akwandibulala, okanye wenza, yenza yandenza ndomelela kuba kusisondeza ngakumbi kuThixo.
Franky • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 3:41 pm • impendulo
Ndivuke ndicinga ngale ntsasa uziva abathiwe lwale likratshi kunye uhlobo Untouchable sokukholelwa ukuba siyaya ekubeni izinto ezininzi ebomini bam phezu okay, ngoko akuyomfuneko ukuba sithembele ngakumbi uThixo. Ndonakele yaye ziyakhunjuzwa ngayo kakhulu kwangoko njengoko imini siqhubeka ku. Enkosi ingqiqo yakho ngale ndlela yaye ndithandaza uYehova uya kubonisa uGrace chola nam ukusuka apho ndikhona mna.
umzalwana wakho kuKristu
raenee • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 6:06 pm • impendulo
Mr.trip lee Dear,
Ngiyakuthanda nje lo (: i Ndinombuzo ibandla lam Kwandile wenza series “ntoni emhlabeni mna i apha?” n im on iinkokeli zolutsha kwaye ndiza ukwenza isifundo a ngumfundi kwaye yonke into wathi esihlangene ngokugqibeleleyo ukuba ngomhla we sezigaba ngokuxhomekeke kuthixo ngexesha ezindle-… ngoko ukuba ok baso i ukusebenzisa ezinye izinto zakho? Kanye uphindo lil okanye izibhalo kodwa kuphela permisson yakho …. I kakhulu ukuthanda izinto yakho yayo diffently ndaneliseke ikhula christian (: enkosi ngokuba uyindoda uthixo n imbeko ubizo lwenu ukuba aye kushumayela. Koothixo ndizokuyenza ezinye izinto enamandla ebomini bakho nobomi familys bakho (:
Joel • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 6:39 pm • impendulo
Ndiyamthanda u hambo.. i ngempela bhuti!
GabeTaviano • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 6:47 pm • impendulo
Waba neminyaka emibini rough, yaye le post ugcwele nje inyaniso onyanisekileyo. edingeka kakhulu kule uyise amantombazana amathathu, kunye nomyeni kumbhali kunye isithethi ogama umyalezo iye yatshintsha ukususela iingxaki zomtshato kunye ngumama kukuzingisa xa bonke lubonakala lulahlekile.
track wakho, Ndilungile, iye isihloko wam ingoma kule minyaka mibini idlulileyo, uhambo. Andiqondi igeza nayiphi na ingoma emsindweni, yaye ndandingakwazi ucele uThixo amazwi usiba awalithethayo na nzulu ukuze umphefumlo wam. Kukho amaxesha xa Amafa zincinane ukuzibulala engqondweni yam. Uqinisekile uzive ngathi uyazama ukwahlukana xa oko yinyaniso ngokunyaniseka.
Kodwa ithemba lokwenene utshintsho wokwenene kakhulu ezixabisa ngaphezu ngokuyeka. Oko Kuliqiniso. Kukho umlo ukuba walwa ngamnye kuthi. I ukuthatha kwakho ixesha ukuba abhale la mazwi, uhambo. Ndiyakube ukufunda eli sithuba ezimbalwa amaxesha ngaphezulu. Bemdumisa uThixo, ngenxa ethetha kuwe ezindlebeni zethu, eqongeni, epulpitini, kwikhaya lakho, kwaye kwi web.
kaLiam • EyoMsintsi 17, 2013 ngexesha 8:17 pm • impendulo
uhambo, ugcine ukubhala ndoda! izithuba lakho lokugcina ababini wathetha kanye apho ndikwi- ebomini yaye ndikhe bekho nje xa ndifuna. UThixo ngokuqinisekileyo usebenza ngawe.
Carlota • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 12:50 mna • impendulo
Oko ke iye ukunceda ukuba baqonde somethings yaye kuya kuthetha alot kum. Umyalezo ubalisa alot noko i sele ihamba nge malunga 5 iminyaka kwaye seku- now.Thank wena Trip Lee.
te ndekai • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 4:06 mna • impendulo
yinyaniso ukuba christian ohamba ngokholo kungekhona sight.i ukuba ngamaxesha nzima; apho yonke into Ukunyathela nxamnye expectations.It zam zaba nzima ukugcina ihlathi lam iNkosi kodwa ngenxa yokuba i wayesazi ukuba intlungu i bangelwa kukugula kwaba yethutyana nesilungiselelwe ukuba yandenza ndomelela ukuze ndingalitshabalalisi me.i kubanjwa uYesu, apha i am i namandla.
Charles • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 4:11 mna • impendulo
Ndicinga ukuba oku piece liqulathe ulwazi oluninzi iinyaniso. Inene, njengoko ikholwa yintoni kundibulala okanye wenza kwenza yandenza ndomelela kuphela. UThixo anisikelele aze akunike nokuqonda ukuze ukuthetha inyaniso yakhe kubantu bakhe.
Kathryn • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 9:31 mna • impendulo
Ndiyabulela kulo myalezo. I kukwakhuthaza ngokwenene kuba sele ngokuba yayinzima emhlabeni 12 kwiminyaka, bathwele i ezazingekho zokugula kunye nam nyani nzulu ulwalamano lwam noThixo. Mna kwindawo apho kwezi ntsuku nje baphelelwe ukuba iimvakalelo, kodwa ndikholelwa ukuba uMoya oyiNgcwele isibongoza ukuba simthembe uYesu baxhomekeke kuye.
Amanda • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 11:03 mna • impendulo
Loo post bakhanyiselwa, ndinceda ngokwenene ukuba izinto ngendlela, ulahlekelwe umzalwana wam 3 kwiinyanga ezidlulileyo ukuba ezigula ezininzi yaye umama wam ukuba sikwinqanaba eziqatha sengqondo esiyingozi ndiyazi ukuba ukwazi ukumelana kufuneka ukuba amandla am evela kuThixo, uvuye ukuba mini phambi kokuba Kwathi ke makhe kukhokelela ukuba uYehova wanikela ngobomi bakhe. Qhubeleka nomsebenzi omhle, wena uyesabeka kwam 18 konyaka ubudala ukubhala umculo kwaye ugcine up kunye nepiyano yakhe, uhlale wambusisa!
Corrie Reynolds • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 11:13 mna • impendulo
Wena uhlala yindlela ibeke ngamazwi oko ndicinga kodwa mna awukwazi ukubhala. Wena abanamakhono emininzi. Siyabulela ngokuba usebenzisa ngezinto nabizelwa ukuba wenze. UThixo akusikelele umzalwana kuwe.
DeniseSheppard • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 12:08 pm • impendulo
Mr. Barefield…….wena a emangalisayo, likhanya umzekelo uthando lukaThixo. Uye ukubusisile kukho lyric ukwabelana umyalezo wakhe. I ukwazisa ukufunda into oyibhalayo, ukuphulaphula umculo wakho kwaye uthanda ukuva kuwe umntu ngexesha elithile. Enkosi ukuba ezintweni ngokwabelana amazwi kaThixo; njalo, HIV, Ukuphakamisa ekunene kwi indawo! Good Sikelela You uMzalwana!
BrandonPulley • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 12:30 pm • impendulo
Ndilahlekelwe umsebenzi wam namhlanje yaye andinako likuxelele ukuba ithini na le yimpendulo yomthandazo lo! Emva Ndemka mna baqhubeka bedanduluka andixelele ukuba bawalawule nceda. Ngoku ndiyazi. I kufuneka sihlale sithobekile yaye ndiyaqonda umsebenzi elandelayo unika mna azisithelisiwe naye ngemisebenzi yam!
Harry Nanthambwe • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 3:24 pm • impendulo
Oku HS ntoni ndisoloko ndifuna 2 ukuweva nokuwafunda. Makabongwe uThixo 4 u bra.
Tendai • EyoMsintsi 18, 2013 ngexesha 7:41 pm • impendulo
Le izinto ezikhuthazayo, ubhuti. Enkosi undikhumbuza iindaba ezilungileyo; isiseko yonke yobomi amaKristu.
Gomezgani uthi • EyoMsintsi 19, 2013 ngexesha 12:46 pm • impendulo
Amen ukuba loo mntu!
Debbie • EyoMsintsi 19, 2013 ngexesha 9:09 pm • impendulo
ingcaciso kwakho oobawo bethu aneentsingiselo kusoloko undinike ukuqonda. Siyabulela kuhanjwe nceda uqhubeke ukunceda ukuvula amehlo am.
Paul Sembereka II • EyoMsintsi 21, 2013 ngexesha 5:19 mna • impendulo
Amen, Iintsikelelo kuwe.
Bobby • EyoMsintsi 22, 2013 ngexesha 9:52 pm • impendulo
Ukushumayela ngayo uhambo!
Sunge • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 3:30 pm • impendulo
Amen. Enkosi kakhulu umoya ezele ukhokelo wenu nokufundisa. Uthando le blog!
Kaila • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 2:58 pm • impendulo
Ndiyavuma ukuba ngokufuthi amaxesha xa ninikela amazwi oyisebenzisileyo, abasoloko ukwenza uzive ngcono. usapho lwam kwaye namava ukuba olu hlobo emngcwabeni umzala wam. Ithe ke yakuba ilondele udubule wabulala ngumntu ingqalelo umhlobo, kwiintsuku ezimbini ngaphambi kokuba lwakhe lokuzalwa 19. Akukho amagama ekuthiwa-ezikhuthazayo baba luncedo kuba umbuzo engundoqo sonke kwafuneka kwaba, ” Kungani ukuba, ukuba nje 'usana?” kodwa, Emveni sijonga emva kwaye sibone ukuba nangona yayisisihlandlo buhlungu ngayo nentsapho yethu kufutshane kunye sihlolisise ulwalamano lwethu kunye nabanye kunye noThixo. Kwakhona wazuza ilungu losapho elitsha kwakamsinya emva intombi yakhe, ngubani kungaba iwele lakhe.
Angie • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 5:03 pm • impendulo
Ngoko kufuneka ufunde eli lungelo ngoku. inkosi ikusikelele.
CynthiaAghomon • EyeDwarha 4, 2013 ngexesha 1:09 pm • impendulo
Oku kunjalo encouraging..God akazange ayiphumelelanga kwaye is not about uqale nayiphi na children..we yakhe kufuneka nje ukugcina ithemba liphila kwaye ukholwe ukuba akanakuze akangesishiyi okanye asilahle. KwabaseRoma 8:18 ithi kuba mna ndigqiba kwelithi, iintlungu zeli amaxesha lakalokunje azinakulinganiswa kwi nobuqaqawuli obu buza kutyhilwa us..amen
kasewe • EyeDwarha 10, 2013 ngexesha 1:59 pm • impendulo
kodwa kwakhona, Ndiye bahlabeka entliziyweni!Ndiyagula ngalo mzuzu kunye Ndandicinga ukuba kutheni iNkosi ngokuvumela ezi zinto kum. Xa ediniwe ukuba ndandiza ngenxa FB amaphepha celebs endizithandayo kunye Ngafika kulo website yakho. Alas! UNdikhoyo waphendula umthandazo wam, wathetha ngqo kum! (ngokusebenzisa uhambo) Oku ngathi imiyalezo Iihambo esenzelwe mna (Kungenxa yokuba uMoya oyiNgcwele usebenzisa ukuba balungiselele kuthi)….UThixo uhlala emkhuza kum ngaye (umculo wakhe,izithuba blog kanye zintshumayelo) Ndicinga ubugxile ukuya kakhulu kule hotele ukuba ayikho ekhaya. Ngoko ke ngoku isizathu sokuba ndiyagula (oko iNkosi uzama ukundifundisa kolu vavanyo)…UThixo qhubeka ukuba anisikelele Trip Lee, kuba iyamangalisa ukuba ubulungiseleli bakho efika kithi (abangcwele Afrika) nokuba thina andivumeli sahlangana, Ndiziva ngathi ndiyazi nawe kuba liyayiqonda into oyithethayo. Kwaye ngenxa yokuba umculo wakho Omohlwayayo ngokwenene, ikhuthaza, ulungisa, fundile!….. Hlala wambusisa!!!!!!!!!
pelumi • EyeNkanga 3, 2013 ngexesha 10:03 pm • impendulo
i ukufumana le
KevinSteele • EyeNkanga 7, 2013 ngexesha 9:02 pm • impendulo
“ukuthobeka yethu ibaluleke ngaphezu ulonwabo lwethu.” Oko ngenene ndibethwe umntu. Qhubeka ukwenza ukuba umculo kuhle, uThixo akusikelele.
sherice • EtiMnga 2, 2014 ngexesha 9:53 pm • impendulo
Mna kuncoma bayakhuthazwa yile…amen!